Phakathi nenkathi yokukhulelwa, umama olindelekile uzothola isisindo, futhi lokhu kuyimvelo. Ukuzuza isisindo akunakwenzeka nje kuphela, kodwa futhi kuyadingeka kulawulwe, ngoba ukuzuza kancane kancane noma ukuzuza ngokweqile ngesikhathi sokukhulelwa kungalimaza yena kuphela, kodwa futhi nengane engakazalwa. Ngakho-ke, uma umama wesikhathi esizayo engasitholi isisindo, umntwana wakhe angabonakala emhlabeni enesisindo esingaphansi kuka-2500 amagremu, okungukuthi, ngaphansi kwesisindo somzimba. Kulesi simo, ingane ingase ibe nezifo ezingenasifo somzimba noma zesifo somzimba. Kungaba yinkinga yokuxuba noma ukuphambuka ekuthuthukisweni.
Owesifazane okhulelwe odla kabi, izinga le-estrogen elisongela ukukhipha isisu kungenzeka noma kungenzeka. Ngakho-ke, kudingeka uqaphele kakhulu, udle kahle, ukuze uzuze isisindo ngesikhathi ukhulelwe . Uma owesifazane okhulelwe edla okungaphezu kwalokho akudingayo, akahlukumezi yena kuphela, kodwa ingane yakhe. Ngakho ungadluli. Kungcono ukudla kahle. Phela, owesifazane okhulelwe onezingozi ezingaphezu kwesisindo sokuthola isifo sikashukela noma angase ahlupheke ngenxa ye-toxicosis ephuzile.
Kanjani kahle ukuchaza, yiliphi isisindo sokukhulelwa okufanele kube? Kulula kakhulu. Ukubala kusekelwe kwinombolo yomzimba womzimba. Lona umphumela wokuhlukanisa isisindo ngesikwele sokukhula. Isibonelo, ngokukhula kwamamitha angu-174 (1.74 amamitha), nesisindo - amakhilogremu angu-63, inani lomzimba lomzimba lizolingana no-63: 3.0276. Lokhu kufana ne-20.80 noma nxazonke 21. Ukuhlola ukuzuza kwesisindo ngesikhathi ukhulelwe, ungasebenzisa itafula elikhethekile. Ngakho-ke, izinkomba zezinhlamvu zomzimba ezingaphansi kweshumi nesishiyagalombili nesigamu zisho ukuthi isisindo sowesifazane okhulelwe singaphansi kwesimanje. With izinombolo index kusukela 18.5 kuya 25, isisindo owesifazane okhulelwe kuyinto evamile. Isisindo esiningi kakhulu ukufundwa kusuka ku-25 ukuya ku-30, futhi inkomba, ebonisa okungaphezu kuka-30, iyisibonakaliso sokukhuluphala kowesifazane okhulelwe.
Kukhona elinye itafula lokuthola isisindo ngesikhathi sokukhulelwa, okubonisa ukwanda okwenziwe kakhulu kwesisindo ngesikhathi ukhulelwe. Leli nani lincike kwisisindo sowesifazane ngaphambi kokukhulelwa. Ngakho-ke, ngaphansi kwesimiso sesigamu seshumi nambili nesigamu kuya kweziyishumi nesishiyagalombili kilogram, ishumi nesishiyagalolunye nesigamu kuya kweziyishumi nesishiyagalombili kilograms kuyinto evamile, eziyisikhombisa kuya kweshumi nanye kanye nengxenye kilograms ngokweqile, futhi ayisithupha kilograms ukukhuluphala. Ngaphezu kwalokho, uma kufanele ube namawele, khona-ke izindinganiso ezilandelayo zizobe zihamba kahle lapha: ama-16 kuya ku-21 kilogram, futhi kungakhathaliseki ukuthi unamazinga amangaki ngaphambi kokukhulelwa.
Lokhu kuyisimiso sesisindo ngesikhathi sokukhulelwa. Futhi isisindo esanqwabelana ngalesi sikhathi sisatshalaliswa ngale ndlela: ingane isisindo esingamakhilogremu amathathu kuya kwezintathu nesigamu, i-kilogram yesiqingatha isisindo se-placenta, isisindo sesibeletho singama-kilogram eyodwa, inani elifanayo le-amniotic fluid isisindo, ivolumu yebele isanda ngesigamu se kilogram, Igazi, amanzi angeziwe avela ku-one nangxenye kuya kwamakhilogremu amabili, futhi amafutha engeziwe engeziwe atholakala ku-kg kuya ku-4 kilogram. Izindleko zenyanga zonke zokuthola isisindo ziyimfihlo. Kumelwe ufunde ukulawula ukuzuza kwesisindo esihle se-trimester. Ngakho-ke, ukuze uthole i-trimester yokuqala, udinga ukuthola amakhilogremu ayisigamu nesigamu, kanye neyesibili neyesithathu - amamitha angu-300 ngesonto ngalinye.
Ngesikhathi ukhulelwe, udinga ukuqapha ukudla kwakho. Ungadli ukudla nge-caffeine ngalesi sikhathi. Ngaphezu kwalokho, uma unomuzwa wokuthi uzuze isisindo esikhulu, ungayeki ukudla, yenza konke kancane kancane, sebenzisa amaprotheni amancane kanye noshukela. Ngezinye izikhathi ukudla okunomsoco kungenzeka ukuxhumana nodokotela wakho. Qinisekisa ukulalela iseluleko sakhe. Khumbula ukuthi ukudla nokudla okungondleki kahle kuyingozi kakhulu empilweni yomama, kanye nengane yakhe yesikhathi esizayo.
Yini i-ovulation ngaphambi kwesikhathi?
Izindlela zokuthola isifo sokubeletha ngaphambi kokubeletha: izakhi zofuzo, ezingenayo, ezingenasidingo. Izinkomba zokuqokwa, imiphumela
Ngubani umqondisi kuqala umbala ifilimu waseRussia "Battleship Potemkin"?
Indlela agqoke intombazane yesimanje kuyinto enhle?